Countiyada dalka oo la sheegay in ay khandaraasyada ku bixiyaan qab ay ku dheehan tahay laaluush iyo eexitaan – The Voice of Northeastern Kenya
Countiyada dalka oo la sheegay in ay khandaraasyada ku bixiyaan qab ay ku dheehan tahay laaluush iyo eexitaan
Sahan laga sameeyay 39 counti oo ay sameeysay gudiga anshaxa iyo la dagaalanka musuqa ee marka magaceeda la soo gaabiyo loo yaqaano EACC ayaa waxa ay shaaca ka qaaday in countiyada dalka ay ka jirto la’aanta daahfurnaanta adeeg-bixinta.
Gudiga ayaa countiyada uusan sahanka ka sameynin ayaa waxa kamid ah 8 counti oo kala ah countiyada Garissa, Lamu, Mandera, Marsabit, Samburu, Tana River, Turkana iyo Wajir.
Talooyinka la soo jeediyay kadib sahankan la sameeyay ayaa waxa ay sheegayan in countiyada dalka marka laga bilaabo mashruucyada horumarineed iyo hirgaliinta sharciga ah in lais hor istaago laaluushka ee herka counti iyo in dadweynaha laga qeyb galiyo qorshaha lagu dajinaayo miisaniyada sanadeedka countiyada iyo sida lagu hirgalin lahaa mashruucyada horumarineed ee countiyadaas laga fulin lahaa in aanan laga qeyb galinin si loo yareeyo musuqa.
Warbixinta ayaa waxa ay sidoo kale sheegeysa in musuqa countiyada dalka ka jiro ay yihiin qaadashada laaluushka,in si xun loo isticmaalo xafisyada countiyada,danaha gaarka ah oo ay leeyihiin qaar kamid ah saraakiisha ka hawlgala xafiisyada dalka ,eexitaanka iyo in inta badan saraakiisha countiyada ka hawlgala ay xaadir ku ahayn xafiisyadooda iyo arrima kale oo dhawr ah.
Sida ku xusan sahankan laga sameeyay countiyada dalka ayaa waxa la sheegay in u musuqa ku badan yahay countiyada kala ah Narok, Kisii, Homa Bay, Bomet, Embu, Bungoma, Kirinyaga, Kakamega, Mombasa, Migori iyo Nairobi.
← Dowladda oo dooneysa in ay qorato boqolaal shaqaale cusub ah
Australia oo lagu wado in ay albaabada isugu dhufato xerada qaxootiga ee jaziirada Manus →